दुर्गममा सेवा दिएर फर्किए अमेरिकी चिकित्सक - Nepal News - Latest News from Nepal
दुर्गममा सेवा दिएर फर्किए अमेरिकी चिकित्सक
By nepalnews	 On Jun 5, 2015
काठमाडौं : एक दर्जनभन्दा बढी भूकम्प प्रभावित विकट क्षेत्रका दुई हजारभन्दा बढी बिरामीको उपचार गरेर अमेरिकामा कार्यरत नेपाली चिकित्सकको टोली फर्किएको छ।
अमेरिका-नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सातजना नेपाली चिकित्सक, एकजना अमेरिकी चिकित्सक र एकजना नर्सले विकट गाउँमा पुगेर सेवा दिएका थिए।
उक्त टोलीले उपचारसँगै प्रत्येक बिरामीलाई राहतस्वरूप दाल, चामल, तेल, दालमोठलगायत खाद्यान्न र सरसफाइका सामग्री पनि वितरण गरेको थियो।
अमेरिकाबाट डा. विनोद ढुंगाना, डा. पकज तिमिल्सिना, डा. रश्मी थापा, डा. जारेट एलोनी, अमेरिकी स्टाफ नर्स एलिजावेत एल रन्स्चौ ग्यानभुर्ट, आईटी म्यानेजर प्रविन कँडेल, सुनिल आचार्यलगायत औषधि र राहत बोकेर भूकम्प गएको पर्सिपल्ट नेपाल आएका थिए।
नेपालमा भूकम्प गएको थाहा पाएपछि उक्त फाउन्डेसनले विभिन्न संघसंस्था, अस्पताल र नेपालीबाट करिब आठ करोड रुपैयाँ, औषधि र खाद्यान्न संकलन गरेको थियो। नेपाल आएकै दिन उक्त टोली नेपालमै रहेका डा. प्रभात अधिकारीको नेतृत्वमा नुवाकोटको समुन्द्रटार पुगेको थियो।
‘हामी रातारात औषधि र राहत संकलन गरेर सम्पूर्ण तयारीका साथ छिट्टै नेपाल आउन सफल भएका थियौं’, डा. ढुंगानाले भने, ‘त्यही भएर गाउँका धेरै बिरामी जाँच्न सक्यौं। राहत पाएर बिरामी दंग भएको देख्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्यो।’
समुन्द्रटारमा पाँच सयभन्दा बढी बिरामीको जाँच गरेपछि उक्त टोली भुटानी चिकित्सकले सञ्चालनमा ल्याएको फिल्ड हस्पिटलमा उपचारका लागि दुई दिन खटियो। त्यसलगत्तै उक्त टोलीले जिल्लाको शिखरबेसी पुगेर घाइतेको उद्धार गरेको थियो।
‘जति विकट ठाउँमा गयो, त्यति नै भयानक दृश्यहरू देखिए। कतिपय ठाउँमा घाइते अलपत्र परेका थिए। कतिपय ठाउँमा पशुपक्षी पुरिएका थिए।
ती सबै छल्दै हामीले सेवा दिन सफल भयौं’, डा. अधिकारीले भने, ‘त्यहाँ चिकित्सकले उपचारमा देखाएको मेहनत र उदारता देख्दा झन् हामीलाई कठिन यात्रा गर्न मन लाग्यो।’
अधिकारीका अनुसार गाउँमा खटिएको भुटानी चिकित्सकको टोलीका साथमा सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक पनि थिए। उनीहरूले प्रारम्भिक जाँच, रिफर र शल्यक्रियाका लागि छुट्टाछुट्टै ठाउँमा फि ल्ड अस्पताल खडा गरेर घाइतेको सेवा गरेका थिए।
नुवाकोटबाट सीधै दुईजना अर्थोपेडिक सर्जनसमेत लिएर उनीहरू सिन्धुपाल्चोकको ढुस्कुन पुगेका थिए। त्यसपछि काठमाडौंका नाङ्लेभारे र सुन्दरीजलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका थिए। सुन्दरीजलमा बिरामी जाँचिरहेका बेला गत वैशाख २९ गते दोस्रो ठूलो भूकम्प गएको थियो।
‘हामी भर्खर बिरामी जाँच गर्न थालेका थियौं। भूकम्प गयो। एकछिन चुपचाप सडकमा बस्यौं’, ढुंगानाले भने, ‘पछि गाडीभित्रैबाट बिरामी जाँच्ने, काउन्सिलिङ गर्ने र औषधि वितरण गर्ने काम गर्‍यौं।’
खोकना र बुङ्मतीमा राहत वितरण गर्दै दोस्रोपटकको भूकम्पले ध्वस्त बनाएको दोलखाको शैलुंगेश्वर पुगेर टोलीले पाँच सयभन्दा बढी बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो।
‘शैलुंगेश्वर पुग्दा हामीले निकै कष्ट बेहोर्नुपर्‍यो। कहिले सडक बिग्रिने त कहिले गाडी बिग्रिने भयो’, डा. थापाले भनिन्, ‘ती सबै दु:ख पार गर्दै हामी दलित समुदायमा गएर सेवा दिन सफल भयौं।’
दोलखाबाट फर्खिएपछि उक्त टोली नगरकोट हुँदै रसुवाको डाँडागाउँ पुगेर उपचारमा खटिएको थियो। ‘मलाई नेपाल आएर बिरामीको हात समात्न पाउँदा आफ्नो महसुस भयो’, नेपाली चिकित्सकसँगै आएकी अमेरिकी नर्स एलिजावेतले भनिन्, ‘सबै मानिस घरबारविहीन भएको देख्दा निकै दु:ख लाग्यो।
त्यसमाथि पनि गर्भवती, सुत्केरी महिला र बालबालिकाको अवस्था दयनीय छ। उनीहरूको राम्रो हेरचाह होस् भन्ने चाहन्छु।’
ढुंगानाका अनुसार फाउन्डेसनले अमेरिकामा संकलन गरेको रकमबाट भूकम्पले ध्वस्त बनाएका स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठनलाई लाग्यो चुनाव
४२ दिनपछि खुल्दै त्रिवि